इरफान घर र्फकदा पत्नी भइन् भावुक – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
इरफान घर र्फकदा पत्नी भइन् भावुक
By डिजिटल खबर Last updated Apr 15, 201990
अभिनेता इफरान खान घर फर्किएलान् ? संभवत धेरैलाई यस्तो विश्वास थिएनन् कि कुनैदिन यी अभिनेता सग्लो शरीर लिएर घर र्फकनेछन् ।
एकदम दुर्लभ र निकै जटिल प्रकृतिको क्यान्सरबाट गुजि्ररहेका इरफान स्वयम् अस्पतालबाट सकुशल र्फकनेमा विस्वस्त थिएनन् । तर, उनी लामो समयको उपचारपछि लन्डनबाट घर फर्किएका छन् ।
यतिका जटिल क्यान्सरसँग जुधिरहेका इरफानले जीवनप्रतिको आशा भने मारिसकेका छैनन् । त्यसो त उनकी पत्नी सुतापा सिकदरले पनि इरफानलाई सक्दो ढाडस दिइरहेकी छिन् ।
सुतापाले लेखेकी छिन्, ‘यो जीवनको सबैभन्दा लामो साल हो । समयलाई कहिले पनि दर्द र आशाले नाप्न सकिदैन । हामी आफ्नो सानो कदम काममा फर्काउँदैछौ र यसका लागि म ति साथी, ति तमाम शुभचिन्तकलाई धन्यबाद दिन्छु कि, जसको प्रार्थनाले हामीलाई यस्तो मौका मिल्यो । मैले कहिले पनि अप्रत्याशित शब्दको अर्थ यति राम्ररी महसुष गरिन । न त मैले व्यक्तिको प्रार्थनालाई यति राम्ररी महसुष नै गरेकी थिएँ ।’
भनिहालौं, उपचारबाट फर्किएका इरफान खानले आफ्नो फिल्मको छायांकन सुरु गरेका छन् । उनी फिल्म ‘हिन्दी मिडियम’को सिक्वेल ‘अंग्रेजी मिडियम’मा काम गर्दैछन् । हालै यस फिल्मको सेटमा इरफान खानको तस्वीर भाइरल भएको छ । अहिलेसम्म यस कुराको खुलासा भएको छैन कि फिल्ममा इरफान खानको अपोजिटमा कुन अभिनेत्री छिन् ।
खबर अनुसार उनीसँगै यस फिल्ममा करिना कपूर खान देखिनेछन् । यद्यपी यसबारे अहिलेसम्म फिल्म निर्माण टिमले कुनै आधिकारिक धारणा सुनाएको छैन ।
इरफान बलिउडदेखि हलिउडसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेका अभिनेता हुन् । उनले बलिउडका ३० भन्दा बढी फिल्म खेलिसकेका छन् । ए माइटी हार्ट, स्लमडग मिलियनेयर, द अमेजिंग स्पाइडर म्यान, लाइफ अफ पाई जस्ता हलिउड फिल्ममा समेत उनको अभिनय देख्न पाइन्छ ।
ActorCancerDigital KhabarEntertainmentFilmHealthIrfan KhanMovies
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ भोलि
९९ वर्षीया महिलाको मृत्युपछि खुल्यो अनौठो रहस्य, शरीरका सबै अंग उल्टा